November 2018 - Page 2 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
November 23, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqeymo is xig-xiga oo Mareykanku asbuucaan ka geystay gudaha Soomaaliya, ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 50 dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeyntii ugu horeysay asbuucaan ayaa Isniintii ka dhacday deegaan kuyaala gobolka […]
November 22, 2018 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Xisaabiye xarun ganacsi oo kutaala Boosaaso ayaa la dilay, sida ay sheegeen ilo-wareedyo deegaanka ah. Axmed Cali Dalaq kaasoo ahaa xisaabiyaha xarunta ganacsiga Saabir ayaa niman aan la garaneyn oo baastoolado wada ku […]
Bosaso-(Puntland Mirror) An accountant from business center in Bosaso has been shot dead, local sources said. Ahmed Ali Dalaq who was accountant for Sabir business center was assassinated by unidentified gunmen with pistols in Bosaso […]
Beled Xaawo-(Puntland Mirror) Al-Shabaab ayaa weerar ay ku qaaday magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ku dishay nabadoon caan ka ah halkaas, sida ay sheegeen ilo-wareedyo deegaanka ah. Weerarka oo xalay saq dhexe ka dhacay […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Todobo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Soomaaliya. Duqeynta ayaa Talaadadii ka dhacday deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya, sida ay bayaan ku sheegeen taliska Mareykanka ee […]
November 20, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa sheegay in ay 37 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ku dileen duqeymo ka dhacay Soomaaliya. Duqeymaha ayaa ka dhacay gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya Isniintii, sida ay bayaan ku sheegeen Taliska Mareykanka […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) U.S. said it killed 37 Al-Shabab fighters in airstrikes in Somalia. The strikes occurred in Mudug region in central Somalia on Monday, U.S. Africa Command said in a statement. There were no civilian […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaan Daahir Amin Jeesow oo katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax maanta oo Talaado ah ka dhacay Muqdisho. Qaraxa ayaa lagu hoos dhajiyay gaariga xildhibaanka, sida ay wararku sheegeen. Xildhibaanka […]
Brussels-(Puntland Mirror) Golaha Midowga Yurub ayaa kordhiyay wakhtiga tababarka Midowga Yurub ee ciidamada Soomaaliya, iyada oo ka dhigay 31 December 2020 waxayna isku raaceen miisaaniyad dhan €22.9 milyan laga bilaabo 1 Janaayo 2019 ilaa iyo […]
Abuja-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaha kooxda Booko Xaaraam ayaa loo malaynayaa inuu si xun ugu dhaawacmay weerar cirka ah oo ay qaadeen militariga Nayjeeriya kaasoo ka dhacay waqooyiga bari ee dalkaaas, sida ay ku waramayaan warbaahinta oo [...]